Sida loo OS ka drive adag wareejiyo mid kale
Sidee si ay u gudbiyaan OS ka Hard Drive in mid kale
> Resource > Transfer > Sidee si ay u gudbiyaan OS ka Hard Drive in mid kale
Marka la isticmaalayo kombiyuutarka in muddo ah, inta badan oo naga mid ah waxay leeyihiin qorshe ay dayactir ku drive hore ay adag tahay in mid ka weyn oo ay u muuqato lama huraan. Markaas arrinta yimaado. Sidee si ay u gudbiyaan OS on drive wayn in mid cusub? Maadaama nidaamka qalliinka jira waddaa weyn oo aan rabin in ay u dib. Si kastaba ha ahaatee, si fudud kaga dayanayaan nidaamka ka hawlgala si aad disk cusub uma shaqeeyo. Waa maxay baahida aad u waa cloning ah disk ama imaging, kaas oo kaa caawin kara si ay u gudbiyaan nidaamka buuxa oo ay ku jirto faylasha boot iyo kuwa qarsoon in ay lagama maarmaan tahay in aad nidaamka.
Sida loo OS ka drive adag in midkiinba midka kale ku wareejin?
Cloning wareejin karaan dhammaan waxyaabaha sida la mid ah sida asalka ah, halka imaging wareejinta habka sida file a image. Si cloning ama imaging wadid aad u adag, waxaad u baahan tahay cloning drive ama qalab imaging. Wondershare LiveBoot Boot CD kaa caawin karaan in ay sameeyaan labadaba. Waxaad dooran kartaa mid ka mid iyaga ka mid ah si ay u gudbiyaan aad OS.
Hel LiveBoot CD / USB halkan
Step1. Boot your computer ka LiveBoot
LiveBoot bixisaa Downlaods CD / USB, oo aad ku helayso deegaanka ah gebi ahaanba nadiif ah si aad si ammaan ah lagu wareejiyo kartaa OS. Waxaa isku leh ugu dambeeyay ee Microsoft PE 3.0 oo la jaan qaada oo dhan kombiyuutarada. Geli CD ama xirmaan USB la your computer, bilowdo your computer oo ay doortaan in ay kabaha ka LiveBoot.
Step2. Cloning ama imaging OS ah
Marka LiveBoot si toos ah bilaabay, u tag "Management Disk" on menu ugu sareeya. Halkan waxa aad ka Gadzhiyev karo ama image disk sida sawirka ka dib.
Dooro mid ka mid ah in ay gurmad wadid aad u adag si waafaqsan tilmaamaha interface ka.
Step3. Hadda OS Transfer
Ka dib markii drive hore taageerto kor u, bedesho aad disk cusub, oo ay bilaabaan in ay u gudbiyaan OS, waxa uu. Haddii aad gjærceler aad OS jira, hadda waxaad dooran kartaa in ay u Gadzhiyev oo aad disk cusub sida tallaabooyinka hore. Haddii aad doorato inaad image aad OS, waxaad dooran kartaa "Disk Soo Celinta" in aad file OS image wareejiyo si aad disk cusub. Waxaa kaliya shaqada 1-click ah.
Ogow badan oo ku saabsan Wondershare LiveBoot Boot CD
Iibso Wondershare LiveBoot Boot CD ($ 59.95)
Sida loo dayactir Waaxaha xun ee Hard Drive
2 Siyaabaha dayactir "BOOTMGR maqan yahay" Dhibaatada
Windows Recovery CD / digsi: A Eebaha Xalka in Windows
PC in Transfer iPhone: Music Transfer, Photos iyo Xiriirada Si fudud
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Samsung casriga ah si ay u PC
Afar siyaabo xogta ka phone Windows wareejiyo qalabka Android for free
Sida loo Demi Xogta laga Android inay Windows Phone?
Sida loo Demi Data ka iPhone in Windows Phone
Sida loo Nokia Xiriirada, SMS, Music, Video, Photos iyo More in 1 Click kaabta
Sida loo raaxaysta Video ku PSP Xitaa PSP 3000?